Qalisa ukuThengisa ngokuZenzekelayo kwiKhosi yakho ekwi-Intanethi ukuphumelela ukuThengisa okungakumbi kwe-B2B | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, 2020 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, 2020 UMichelal Habiger
Enye yeendlela ezizezona zinenzuzo yokwenza imali nge ekhompyutheni okanye eCourse. Ukufumana ababhalisile kwincwadana yakho kunye nokuguqula ezo zikhokelela kwintengiso, unganikezela simahla, uphile kwiwebhu kwiwebhu okanye ukhuphele simahla ii-ebook, amaphepha amhlophe, okanye ezinye izikhuthazi zokufumana abathengi beB2B ukuba bakulungele ukuthenga.
Qalisa ikhosi yakho ekwi-Intanethi
Ngoku ukuba ucinga ngokuguqula ubuchwephesha bakho bube yikhosi ye-intanethi enenzuzo, kulungile kuwe! Iikhosi ezikwi-Intanethi yenye yeendlela ezilungileyo zokuhambisa amathemba kwintengiso ephezulu. Ngokusebenzisa izixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo ukwenza ezi ntengiso, ungalonyusa izinga lokuguqula ngaphandle kokunyusa umthwalo.
Ukuthatha isigqibo sokuba uza kufundisa ntoni -Xa ufundisa iklasi, umzekelo malunga nesixhobo sokuthengisa esizisebenzelayo, licebo elilungileyo ukufundisa into oyithandayo okanye enye onobuchule kuyo.
Misela abaphulaphuli bakho ojolise kubo - Wonke umntu ufuna oko imephu yendlela enye eziza kubanceda bakhulise ishishini labo ukuya kwinqanaba elilandelayo. Nokuba ngumntu okanye ishishini, bafuna ukufumana izisombululo, izibonelelo kunye neziphumo ezinokubanika ikhosi kwi-Intanethi. Iziphumo ezithembiswe yikhosi yakho ekwi-Intanethi kufuneka zichazwe ngokucacileyo ukuze umthengi wakho enze isigqibo sokuthenga ngokucacileyo.
Zama ukwenza igama lekhosi yakho ekwi-intanethi ejongana nesiphumo esifunekayo. Umzekelo, ukuba isiphumo kukuba abathengi bakho bandise ukuguqulwa kokuthengisa. Isihloko sekhosi esithi "Yenza i- $ 5,000 yakho yokuqala yokuthengisa ngaphantsi kweveki" iya kufumana iziphumo ezingcono kunokuba "Yandisa njani ukuThengisa kwiShishini lakho," umzekelo.
Misela inani labantu bakho -Ngaba uyafuna ukunika imveliso yakho kwimdla othile okanye kwiqela labantu? Ngaba umthengi wakho ofanelekileyo ngumntu oqhuba ishishini lakhe, kunye noosomashishini abakwi-Intanethi okanye ezinye iingcali? Ngoku lixesha lokuba uzibuze ukuba loluphi uhlobo lomthengi ofuna ukutsala umdla kwikhosi yakho.
Yenza ulwandlalo lwezifundo kunye nezihloko ezibonelela ngexabiso kumthengi onokubakho- Ezinye zeekhosi zekhosi ezigqwesileyo kwi-Intanethi zinokubandakanya:
Ukutshintshela kwikhondo elitsha
Ukuthatha ikhondo lomsebenzi wakho uye kwinqanaba elilandelayo
Ukunyusa imveliso kunye nobuchule ngokulula nangexesha elincinci
Ukufunda itekhnoloji entsha enje nge-AI kunye nokukwazi ukuyisebenzisa kwaye uyisebenzise ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ukhuseleko olwandisiweyo lwasekhaya okanye lweshishini.
Ukunyusa ukuthengisa kunye nokuguqula amaxabiso ngeenkqubo zokuthengisa eziqinisekisiweyo okanye itemplate.
namaxabiso Ngamaxabiso, unokutshintsha imigaqo ukufezekisa iimfuno zakho. Unokufumana ukuba ixabiso eliphezulu lolwazi oluxabisekileyo olunikezelayo kwaye ufumane iziphumo ezingcono. Abanye abathengi baya kunika impendulo entle ngakumbi ukuba useta ireyithi ephezulu kunokuba ubonelela kancinci. Ungahlala uhlala jonga ukuba intengiso iza kuthini.
Ukuba awufumani mpendulo uyifunayo, ungasoloko utshintsha ixabiso lakho okanye wenze izithembiso eziya kuthi zirhwebeshe abathengi kwisefaneli yentengiso. Umzekelo, unokubonelela ngesiqulatho seentsuku ezingama-30 simahla kwaye emva koko ubonelele ngomxholo owongezelelweyo okanye isibonelelo esikhethekileyo ngexabiso olisetileyo.
Ukuqhuba ngokuzenzekelayo yonke into ekhosi yakho ekwi-Intanethi
Ukuthengisa ikhosi ekwi-Intanethi kunokuba ngumceli mngeni. Ukwakha ukuthembana kunye nokubonisa ukuba kutheni umthengi enokuthenjwa kubalulekile. Xa unikezela ngento exabisekileyo enjengewebhu yolwazi yasimahla, incwadana yeendaba ye-imeyile, i-eBook, okanye ingxelo, ebandakanya ulwazi olunokuthi lusebenze umthengi alufumane lubalulekile kubo.
Ngexesha lokubhalisa okokuqala, unako Ababhalisi bophando ukufumanisa eyona nto banomdla kuyo kwaye babonise amava abo onke ngexesha nasemva kwekhosi. Kukho izixhobo zokulandelela nge-imeyile ezikhoyo ezinokuthi zenze imisebenzi enjengokugcina umkhondo wabafowunelwa bakho be-imeyile. Unokwenza ifom yokubhalisa ngokukhawuleza eyenza ukuba bangene kungekuphela kwidilesi ye-imeyile kodwa kunye negama labo kunye nemimandla ethile enomdla.
Okwangoku imeyile yokulandelela isixhobo esizisebenzelayo, umzekelo, ikuvumela ukuba uthumele i-imeyile eyenzelwe wena ngokubhekisele kwikhosi yakho ekwi-intanethi kunye nemveliso eyongezelelweyo enxulumene noko ukugcina phambi nasezingqondweni zabathengi abanokubakho. Ngokujolisa kwintengiso yakho, unokwakha ukuthembela ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba abathengi bangoku nabedlulileyo baya kulibeka igama malunga nento oyinikezelayo.
Izixhobo zokulandelela zinokunceda ukukhulula ukuthengisa kwakho kunye namaqela okuthengisa ukuba eze nomxholo owongezelelweyo kunye nemikhankaso kwaye ujolise kumanyathelo okuthengisa okwenyani abo banokubakho nabathengi banamhlanje baya kuphendula kwaye bandise ukuthengisa kwakho.
Ukuzenzekelayo okunokukhulisa ishishini lakho kunye nokwandisa ukuThengiswa kweeKhosi kwi-Intanethi
Uluhlu lwakho lwe-imeyile yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kunye nezinto ezinamandla onazo zokuthengisa ikhosi yakho ekwi-Intanethi, ukuvala ukuthengisa kunye nokukhulisa ishishini lakho. Yakha i-imeyile yakho uluhlu ngokwenza umazibuthe okhokelayo oya kuthi ufumane abathengi abanokubakho bakunike idilesi ye-imeyile.
Ngokubanika ixabiso lokwenyani kumxholo wakho wasimahla kuya kubenza ukuba babenakho ukukunika ulwazi nge-imeyile ukubanika nangaphezulu koko ubanikezelayo kwaye ubakhokele ngentambo yokuthengisa kunye nenqanaba eliphezulu lokuguqula ngo:
Amabali empumelelo yabanye abathengileyo ikhosi yakho kunye neziphumo abazifumeneyo ngokuthatha.
Ukucacisa ngokucacileyo iziphumo zekhosi ezinokulindelwa ngumthengi xa bethatha ikhosi yakho ekwi-Intanethi.
Amaxabiso akhethekileyo, iminyhadala, okanye ezinye izibonelelo ezinokuthi zibakhuthaze ngakumbi ekwenzeni isigqibo sokuthenga.
Malunga nokulandela uFred
Landela uFred lulwandiso lwe-chrome oluya kwenza ukuba kuthunyelwe i-imeyile yokukhumbuza kumntu ongakuphenduliyo. Into ekufuneka uyenzile ukuyivula kwaye uvumele ukuLandela uFred akwenzele wonke umsebenzi onzima kwaye nje ukuba umntu alandele emva koko uphendule kwaye usisinyathelo esinye kufutshane nentengiso.
Bhalisela ukulandela uFred mahala
tags: i-email automationukulandelisalandela u-freduyalandelai-imeyile yokuthengisa
UMichel Habiger ngumbhali ongumxholo onamava kunye nomthengisi kunye namava eminyaka engama-6. Okwangoku ingcali yokuthengisa ephezulu e LandelaUpFred.